कोइराला परिवारमा फाटो छ भन्नु गलत हो,शेखर कोइराला – YesKathmandu.com
बिहीबार ०५, साउन २०७४
झण्डै डेढ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता डा. शेखर कोइराला र नेतृ सुजाता कोइराला एक ठाउँमा भेला भएका छन्। कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा कोइराला परिवार एक ठाउँमा नरहेको हल्ला चलिरहेका बेला बुधबार शशांक, शेखर र सुजाता एक ठाउँमा भेला भएर पारिवारिक एवं राजनीतिक वार्तालाप गरेका हुन्।
शशांक निवास टोखामा जम्मा भएका कोइराला परिवारका तीन सदस्यहरुले पारिवारिकसँगै कांग्रेसभित्रको राजनीति, भावी रणनीति र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल गरेका थिए। भाइ शशांकको निम्तोमा दाइ शेखर र दिदी सुजाता टोखा पुगेका हुन्।
नेता शेखर कोइरालाले उक्त भेटलाई पारिवारिक भनेका छन्। उनले भने, ‘तीन भाइबैनाबीच यसरी बसेर कुराकानी नभएको धेरै समय भएको थियो। आज एक ठाउँमा भेला भएर पारिवारिक कुरा गरेका हौं।’ उनले पारिवारिक भेटमा पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताए। कोइरालाहरु एक ठाउँमा नभएको भन्ने कुरालाई भने उनले अस्वीकार गरे। उनले भने, ‘हामी कोइराला परिवार जहिले पनि एक ठाउँमै उभिएका छौं। कोइराला परिवारमा फाटो छ भन्नु गलत हो। त्यसमा सत्यता छैन।’
यसअघि पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा नेतृ सुजाता कोइरालाले पार्टी सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेपछि उनलाई मनाउन शशांक र शेखर मण्डिखाटारस्थित सुजाता निवासमा भेला भएर कुराकानी गरेका थिए। शशांक र शेखरकै आग्रहपछि सुजाताले पार्टी सभापतिमा उठ्ने आफ्नो पूर्वघोषणा फिर्ता लिँदै सभापतिमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसबेला पनि अहिलेको झैं दाइ शेखर र भाइ शशांकलाई दायाँबाया राखेर सुजाताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन्। नेतृ कोइरालाले त्यतिबेला पार्टीलाई बचाउन आफूहरु एक ठाउँमा उभिने बताएकी थिइन्।
One thought on “कोइराला परिवारमा फाटो छ भन्नु गलत हो,शेखर कोइराला”
सुदन खुस says:
भाग खोज्ने कुरामा हामी एक छौं र हुन्छौं पनी ,
यो हाम्रो ख़ानदानी परम्परा हो …
पारस डेढ महिनादेखि थाई जेलमा
सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा दलहरु सहमत, अन्य विवाद कायमै
नेम्वाङ शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा
माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो बैठकमा पूर्वराजाको त्रास
मन्त्री माग्दै गच्छदार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा